DAAWO: Garsoore Mike Dean Oo Samaynaya Ficiladii Uu Jamaahiirta Kubbada Cagta Kaga Yaabsan Jiray, Qosolkii Sergio Aguero Iyo Kabtankii Uu Dean Sameeyay. - Gool24.Net
DAAWO: Garsoore Mike Dean Oo Samaynaya Ficiladii Uu Jamaahiirta Kubbada Cagta Kaga Yaabsan Jiray, Qosolkii Sergio Aguero Iyo Kabtankii Uu Dean Sameeyay.
Sergio Aguero ayaa saddexley goolal ah ka dhaliyay kulankii Chelsea ee Etihad Stadium wuxuuna xaq u yeeshay inuu kubbada kala caraabo garoonka laakiin garsoore Mike Dean ayaa markale indhaha kubbada cagta ku xaday falkii uu kula kacay Sergio Aguero markii uu kubbada saddexleyda uu ku dhaliyay ka soo doontay.
Sergio Aguero ayaa si layaableh sare ugu soo qaaday heerka gool dhalintiisa iyo tartanka kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premier league wuxuuna hadda culays wayn soo saaray Mohamed Salah laakiin Aguero ayaa hadda kooxdiisa City ka caawinaya in ay koobka Premier league difaacato.
Markii ay soo dhamaatay ciyaartii Manchester City iyo Chelsea ee uu Sergio Aguero oo ciyaarta badal looga saaray uu garoonka ugu soo laabtay in uu ciyaartoyda kooxdiisa farxada la qaybsado isla markaana uu garsooraha ka soo doonto Mike Dean ayuu si lama filaan ah u waayay meel ay kubbadii martay.
Garsoore Mike Dean ayaa kubbada si lama filaan ah u galiyay garankiisa hoostiisa oo waliba dhabarka ah markii uu ka soo hor baxay Sergio Aguero oo kubbada raadinaya waxa uu si lama filaan ah markiiba ugu jeedsaday in uu kubbada ka soo saaro dhabarkiisa taas oo Sergio Aguero lama filaan ku noqotay isla markaana uu qosol kaga wadhay.
Sergio Aguero iyo garsoore Mike Dean ayaa farxad isku salaamay laakiin waxay markiiba arintani dadka soo xusuusisay dhacdooyin badan oo uu garsoore Mike Dean ka soo sameeyay garoomada Ingiriiska.
Garsoore Mike Dean ayaa lagu shaabadeeyay in uu yahay taageere kooxda Tottenham ah kadib markii hore loo arkay Mike Dean oo qaab dabaal deg waali ah u samaynaya goolal ay Tottenham soo dhalisay.
Laakiin waxa uu garsoore Mike Dean caan ku yahay ficilada iyo waliba astaamaha jidh ahaaneed ee aanu jirin garsoore kale oo la midka ahi balse waxa uu qaatay kulan fiican oo aanu abuurin wax muran ah isaga oo rekoodhe ku abaal mariyay Man City oo goolal badan haysatay isaga oo aan u joojin nooca natiijadu ahayd.
Marka laga yimaado dhacdada uu Mike Dean indhaha caalamka ku soo jiitay waxaa sidoo kale baraha bulshada lagu hadal hayaa qaabkii jaaska u eegayd ee uu Raheem Sterling rekoodhaha ugu dhigay waxaana ka mid ah sawirka sare iyo qaabkii uu u tilmaamay rekoodhaha.
Haddaba halkan ka daawo qaabkii qosolka ahayd ee ahayd ee Mike Dean uu uga yaabsaday Sergio Aguero ee baraha bulshada lagu hadal hayo.